Online Marg | कमेडी क्लब बन्द भएको पिडा निको हुन नपाउदै ’मुन्द्रे’ लाई अर्को झड्का, फुलेन्देकी आमाले चालिन् कडा कदम !
कमेडी क्लब बन्द भएको पिडा निको हुन नपाउदै ’मुन्द्रे’ लाई अर्को झड्का, फुलेन्देकी आमाले चालिन् कडा कदम !
चर्चित कलाकार जितु नेपाल मुन्द्रलाई झड्का लाग्नेगरी उमेश राई उर्फ ’फुलन्देकी आमा’ले कदम चालेकी छन् । उनले मुन्द्र बाहिरिएपछि आफ्नो नामबाट सो चलाउन लागेकी हुन् ।
नेपाल टेलिभिजनमा गत सोमबार ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’को अन्तिम भाग प्रसारण भयो। जितु नेपाल ’मुन्द्रे’ को नेतृत्वमा करिष्मा मानन्धर, उमेश राई (फुलन्देकी आमा), राजेन्द्र नेपाली (लट्टे) आदि कलाकार संलग्न थिए।
दर्शकले रुचाए पनि प्रायोजक कि एडभर्टाइजिङ, जितु नेपाल र उमेश राईबीच असमझदारी बढेपछि कार्यक्रम बन्द भएको थियो। गत हप्ता कलाकार जितुले ’मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द गर्नुपर्ने कारणबारे जानकारी दिन प्रेस भेला गरेका थिए।
भेलामा उनले उमेश राईले आफूसँग सल्लाह नगरी अर्को टेलिभिजन सोको प्रस्तोता बनेकोमा चित्त दुखाएका थिए। निर्माण कम्पनी ’कि एडभर्टाइजिङ’ ले यसबारे सल्लाह नगरेकोले कलाकारबीच तालमेल बिग्रेको भन्दै सो बन्द गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
जितुले कमेडी क्लब छोडेपछि अब कमेडी क्लब कसले सञ्चालन गर्ला भन्ने दर्शकमा जिज्ञासा छ। कि एडभर्टाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक रवीन्द्र कुमार रिजाल (शशि) ले भने, ’जितु नेपालजीले छोडेपछि हामी अरु कोही प्रस्तोताको खोजीमा लागिसकेका छौं। छ हप्ताभित्र कमेडी क्लबको नयाँ संस्करण सुरु हुनेछ।’
जितु र करिष्मा नदेखिए पनि कमेडी क्लबमा उमेश राई र राजेन्द्र नेपालीले सोमा निरन्तरता दिने समेत उनले जानकारी दिए।
धुर्मुस–सुन्तलीको ठगी धन्दाबारे अर्को खुलासाः रंगशाला छोड्ने बित्तिकै आफ्ना लागि यसरी किने १० करोडको जग्गा !
रंगशालाको हिसाब सोध्दा सुन्तलीको पसिना छुटेपछि…